Ogaden News Agency (ONA) – Dambi Lagu Helay Kuwii Agaasimay Qaraxyo 2010 Kadhacay Magaalada Kampala.
Dambi Lagu Helay Kuwii Agaasimay Qaraxyo 2010 Kadhacay Magaalada Kampala.
Xaakimka maxkamad ku taalla dalka Uganda ayaa koox islaamiyiin ah kuhelay dembi ladhiidha labo qarax oo sanadkii 2010-ka lagu qaaday labo goobood oo lagu daawanayay ciyaartii ugu dambeysay ee tartanka kubadda cagta ee sanadkii 2010, kaasi ooy ku dhinteen in kabadan 70 qof.
Qareenka ayaa shan qof ku helay dambigaasi, saddex kalena dambi ayaa lagu waayay, waxaana hadda wali socota go’aan ka gaadhista shan qof oo kale. Alfonse Owiny-Dollo, oo soo xiganaya dadka markhaatiyada ah ee horeyba looga maxkamadeeyay ku lug lahaanshaha arrintani ayaa waxa uu Ciisa Axmed Luyima ku helay dambi ah in uu soo maleegay qaraxyadaasi ay gaysatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Dadka eedeysaneyaasha ah oo lix ka mid ah ay u dhasheen Kenya, shan reer Uganda ah iyo labo Tanzanian ah ayaa waxa ay sheegeen in jirdil lagu sameeyay si ay u qirtaan dambiyadaasi basle sheegashadaasi ayaa waxaa ku gan saydhay maxkamadda.
Xaakimka maxkmadda, Alfonse Owiny-Dollo, ayaa sheegay in raggani aan lagu tilmaami karin in ay ka tirsanaayeen urur argagxiso, maadama dawladda Uganda aysan u aqoonsanayn Al-Shabaab in ay tahay urur argagxiso sanaddii 2010-kii. Waxay ku doodeen in sirdoonka dalalka Britian iyo Maraykanka ay jirdileen, balse maxkmadda dastuuriga ay Uganda ayaa eedayntaasi ku gacansaydhay.
Billowga dhagaysiga xukunkan ayaa saacado dib loo dhigay kadib markii ay korontada maxkmadda go’day. Ammaanka maxkmadda ayaa aad loo adkeeyay. Dowladda Uganda waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askeri oo Al-shabaab la dagaalama.